गण्डकीमा २२ थपिए, कोरोनाभाइरस संक्रमितको संख्या १ हजार ६८२, घर फर्किनेहरु १,५०९ पुगे – Online Annapurna
३० श्रावण २०७७, शुक्रबार १२:४७ August 14, 2020 16 Views
अनलाइनअन्नपूर्ण/साउन ३०, पोखरा
गण्डकी प्रदेशमा कोरोना भाइरसबाट संक्रमण हुनेको संख्या १ हजार ६८२ पुगेको स्वास्थ्य निर्देशनालय पोखराले बताएको छ ।
शुक्रवार दिउँसो ३ वजे गरिएको दोश्रो अध्यावधिक विवरण अनुसार थप १ जनामा संक्रमण पुष्टि भएको स्वास्थ्य निर्देशक, गण्डाकी कोरोना नियन्त्रण तथा रोकथाम कार्यक्रमका प्रवक्ता डा. विनोद विन्दु शर्माले जानकारी दिनुभयो ।
क्षयरोग उपचार केन्द्र, पोखरामा गरिएको परिक्षणमा तनहुँको व्यास नगरपालिका वडा नं १ का वर्ष ६९ की एक महिलामा संक्रमण पोजेटिभ देखिएको छ । उहाँलाई पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको आईसोलेसनमा राखिएको छ ।
यसअघि शुक्रवारनै बिहान ८ वजे गरिएको पहिलो अध्यावधिक विवरणमा क्षयरोग उपचार केन्द्र, पोखरामा गरिएको परिक्षणमा तनहुँका २० र स्याङ्जाका १ गरी २१ जनामा संक्रमण पोजेटिभ देखिएको थियो ।
डा. शर्माका अनुसार तनहुँको भानु नगरपालिका वडा नं १ का वर्ष २७, ४९, ३९, २८, ५२, २२, ४०, ३४, ४३, ३७, ५०, ४०, २८ र ३५ वर्षका १४ जना पुरुष तथा ५ वर्षिया वालिकासहित वर्ष ३१, २८, ३०, ५६ र ३७ का ६ महिला गरी २० जनामा संक्रमण पोजेटिभ देखिएको हो ।
यस्तै, स्याङ्जाको पुतलीवजार नगरपालिका वडा नं १ का वर्ष ३९ का एक पुरुषमा पनि संक्रमण पोजेटिभ देखिएको छ । शुक्रवार बिहान २१ र अपरान्ह थपिएका १ जनासंगै गण्डकी प्रदेशमा कोरोना संक्रमितको संख्या १६ सय ८२ पुगेको हो ।
पछिल्लो २४ घन्टामा क्षयरोग उपचार केन्द्र पोखरामा कुल ८३० वटा नमूना परिक्षण गरिएको डा. शर्माले जानकारी दिनुभएको छ । पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा ३९ जनाको परिक्षण गरिएको छ । योसंगै गण्डकीमा गत २४ घन्टामा कुल ८६९ नमूना परिक्षण गरिएको हो ।
गण्डाकी प्रदेशमा अहिलेसम्म ३२ हजार ३४६ जनाको पीसीआर परिक्षण गरिएको छ । ३० हजार ६६४ जनाको परिक्षण नतिजा नेगेटिभ आएको छ ।
गण्डकीका कोरोनालाई जितेर घर फर्किनेको संख्या १५ सय ९ पुगेको छ भने ५ जनाले ज्यान गुमाएका छन् ।